Nahoana no Tsy Valiany ny Vavaka Sasany? Andinin-teny Momba ny Vavaka
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Vlax any Rosia) Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Tian’i Jehovah Andriamanitra, ilay Raintsika any an-danitra, ny mihaino ny vavaka avy amin’ny fo ataontsika. Misy antony anefa matoa izy tsy mamaly ny vavaka sasany. Inona izany, ary inona no tokony hotadidintsika rehefa mivavaka isika? Ireto misy toro lalana vitsivitsy avy ao amin’ny Baiboly.
“Rehefa mivavaka ... ianareo, dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana.”​—Matio 6:7.
Tsy tian’i Jehovah hanao vavaka tsianjery isika, na hamaky an’izany avy ao anaty bokim-bavaka. Tiany kosa raha izay tena ao am-pontsika no resahintsika aminy. Tsy ho sorena ve ianao raha zavatra mitovy foana no resahin’ny namanao aminao isan’andro? Mifamboraka ny ao am-po ny tena mpinamana. Raha izay tena tsapantsika koa no resahintsika amin’ilay Raintsika any an-danitra, dia asehontsika hoe tena namantsika izy.
“Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria ratsy ny anton’ny fangatahanareo.”​—Jakoba 4:3.
Mazava ho azy fa tsy hamaly ny vavaka ataontsika Andriamanitra, raha zavatra andrarany na tsy tiany no angatahintsika. Ahoana, ohatra, raha miloka ny olona iray, dia mangataka fanampiana amin’Andriamanitra mba ho tsara vintana? Hamaly ny vavaka hoatr’izany ve i Jehovah? Tsia. Efa nilaza mantsy izy hoe tsy tokony ho tia vola isika, na hino zavatra tsy tena misy toy ny vintana. (Isaia 65:11; Lioka 12:15) Raha tiantsika hamaly ny vavaka ataontsika àry Andriamanitra, dia tokony hifanaraka amin’izay lazainy ao amin’ny Baiboly ny fangatahantsika.
“Izay manampin-tsofina tsy hihaino ny lalàna, na ny vavaka ataony aza dia maharikoriko.”​—Ohabolana 28:9.
Tsy namaly ny vavaka nataon’ireo olona tsy nankatò ny lalàny Andriamanitra fahiny. (Isaia 1:15, 16) Mbola tsy niova izy. (Malakia 3:6) Raha tiantsika hamaly ny vavaka ataontsika izy, dia tsy maintsy miezaka mankatò ny lalàny isika. Ahoana anefa raha nanao zavatra tsy nety isika taloha? Hamela antsika i Jehovah raha miova isika ary miezaka mampifaly azy. Hihaino antsika indray izy amin’izay.​—Asan’ny Apostoly 3:19.
“Izay manatona” an’Andriamanitra “dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa an’izay mitady mafy azy.”​—Hebreo 11:6.
Tsy natao hanamaivanana antsika fotsiny ny vavaka rehefa miady saina isika. Fomba iray ampisehoantsika ny finoantsika izy io sady anisan’ny fanompoana an’Andriamanitra. Nilaza i Jakoba mpianatra fa tokony “hangataka amim-pinoana hatrany” isika, fa raha tsy izany dia tsy ho afaka “hanantena handray na inona na inona avy amin’i Jehovah.” (Jakoba 1:6, 7) Raha te hino an’Andriamanitra isika dia mila mianatra Baiboly. Hahafantatra azy isika amin’izay, hahalala ny sitrapony, ary hatoky hoe mihaino ny vavaka ataontsika izy.
Na dia tsy mamaly ny vavaka sasany aza Andriamanitra, dia tena mihaino sy mamaly ny vavaka ataon’ny olona an-tapitrisany izy. Miresaka ny zavatra tokony hataonao ny Baiboly, raha tianao hampifaly an’Andriamanitra ny vavaka ataonao. Manazava an’izany ny lahatsoratra manaraka.
Hizara Hizara Nahoana no Tsy Misy Valiny ny Vavaka Sasany?